कोभिड–१९ को तेस्रो लहर सुरु, स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न विज्ञको सुझाव
श्रावण २१, २०७८ बिहीबार
काठमाडौँ, साउन २१ गते । केही दिनयता देशभर कोभिड–१९ बाट सङ्क्रमितको हुनेको सङ्ख्या ह्वात्तै बढ्न थालेको छ । अघिल्लो दिनसम्म तीन हजारको हाराहारीमा रहेको कोभिड सङ्क्रमण बुधबार अप्रत्यासित रूपमा बढ्दा सङ्क्रमित हुनेको सङ्ख्या चार हजार नाघेको छ ।
कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या अप्रत्यासित रूपमा बढ्न थालेपछि सम्बन्धित विज्ञहरूले यसलाई कोभिड–१९ को तेस्रो लहरको सुरुवात भएको बताएका छन् । उहाँहरूले खोपलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन सुझाव दिँदै जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्न पनि सबैलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।
तेस्रो लहरको सुरुवात
वरिष्ठ भाइरोलोजिष्ट डा. वासुुदेव पाण्डेले नेपालमा कोभिड–१९ को तेस्रो लहर सुरु भएको भन्न मिल्ने बताउनुभयो । सरकार र नागरिकको लापरबाहीका कारण कोभिड बढेको भन्दै उहाँले नियन्त्रणका लागि आ–आफ्नो क्षेत्रमा सतर्क हुनुपर्ने र उचित पहल गर्नुपर्ने बताउनुभयो । कोभिड बढ्नुको प्रमुख कारणबारे डा. पाण्डेले भन्नुभयो, सरकारी क्षेत्रबाट विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन हुनु, राजनीतिक दलका व्यक्तिहरूले नाराजुलुस र विभिन्न सभा सम्मेलन गर्नु, नागरिकले जनस्वास्थ्य मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्नु नै प्रमुख कारण हुन् ।
“हाल सहर बजारमा कोभिडलाई बेवास्ता गर्दै नागरिक निर्धक्क हिँड्न थालेका छन्”, वरिष्ठ भाइरोलोजिष्ट डा. पाण्डेले गोरखापत्रसंँग भन्नुभयो– “सार्वजनिक सवारीसाधनमा हिँड्दा मास्क नलगाउने तथा ठेलमठेल गरेर आउन जाने गरेका छन् । यसले झन् समस्या पार्दैछ ।”
लकडाउनले मात्र नियन्त्रण हुन्न
इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्वनिर्देशक समेत रहनुभएका डा. पाण्डेले लकडाउनबाट मात्र कोभिड नियन्त्रण नहुने बताउनुभयो । देशको आर्थिक अवस्था चलायमान गर्न पनि लकडाउन गर्न नहुने भन्दै उहाँले सवारीसाधनमा जोरबिजोर गर्ने, गाडीमा धेरै मानिस नचढ्ने, कार्यालयमा फरक फरक समय काम गर्ने गरी लकडाउनमा जान सकिने धारणा राख्नुभयो ।
जनस्वास्थ्यका मापदण्ड प्रभावकारी ढङ्गले पालना गर्ने हो भने सङ्क्रमण दरलाई घटाउन सकिने डा. पाण्डेको भनाइ छ । लकडाउनमा जाँदा रोजगारी गुमेका व्यक्तिहरूको जिम्मा राज्यले लिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । जापान, अस्ट्रेलियालगायतका विकसित देशमा यदि लकडाउन भएको अवस्थामा रोजगारी गुमेकाहरूलाई राज्यले सात सय डलरसम्म दिने गरेको छ, डा. पाण्डेले भन्नुभयो, “नेपालमा भारी बोक्ने भरियाहरू काम नपाएर भोकै मर्ने स्थिति छ । यस्ता वर्गलाई राज्यले हेरिदिनुपर्छ ।” यस्तै वरिष्ठ सरुवा रोग विशेषज्ञ डा. शेरबहादुर पुनले तेस्रो लहरको स्थिति देखा परेको भन्दै त्यसलाई सामना गर्न तयारी अवस्थामा रहनुपर्ने बताउनुभयो । तेस्रो लहर आइसकेको भन्न नमिल्ने भन्दै उहाँले सरकारले कोभिड नियन्त्रणमा प्रभावकारी काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । पछिल्लो समय कोभिडप्रति हेल्चक्र्याइँ गर्न थालिएको धारणा राख्दै उहाँले खोप केन्द्रबाटै कोभिडको सङ्क्रमण बढ्ने जोखिम रहेको बताउनुभयो ।
खोपको महाअभियान आवश्यक
सरुवा रोग विशेषज्ञ डा. पुनले कोभिडविरुद्धको खोपको महाअभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । जति पनि खोपहरू उपलब्ध छन्, त्यसलाई यथाशीघ्र लगाउने काम गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । कोभिड खोपले मात्र बच्न सकिने भन्दै डा. पुनले खोपलाई सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
कोरोनाका दुवै मात्रा खोप प्रभावकारी
भर्नाअघि बालबालिकाको आँखा परीक्षण
सवा तीन करोड मात्रा खोप आउने निश्चित
बालबालिकालाई दशैँलगत्तै खोप
पेट सिटिस्क्यान मेसिन नहुँदा विदेश जान बाध्य
नेपालमै जिन सिक्वेन्सिङ परीक्षण सुरु
अट्ठाइस प्रतिशतले लगाए पूर्ण खोप
मुटुरोगीको सङ्ख्या बढ्दै
रेबिजविरुद्ध सचेतनाको खाँचो